'Ngamcela uMbeki ukuba aphathe ihlandla lesithathu ukuze kunqandwe uZuma' | News24
LAST UPDATED: 2018-11-22, 12:57
'Ngamcela uMbeki ukuba aphathe ihlandla lesithathu ukuze kunqandwe uZuma'
Johannesburg – Lowo owayenguNgqongqoshe wezobuNhloli kuleli uRonnie Kasrils uthi wacela lowo owayengumengameli uThabo Mbeki ukuba angenele ukhetho lokuphatha i-ANC ihlandla lesithathu ukuze kuvinjelwe uMengameli Jacob Zuma ukuba aqhoqhobale lesi sikhundla.
Uphawule kanje ngoLwesibili ebusuku eVincent Mabuyakhulu Conference Centre ngesikhathi ethula incwadi yakhe esihloko sithi A Simple Man – exoxa ngobudlelwano bakhe noMengameli Zuma ngesikhathi besekudingisweni ngeminyaka yama-80s.
"Hhayi ngoba ngangizama ukuveza uMbeki njengongcwelengcwele, kepha ngokungangabazi kwakungukumelana noZuma," kusho uKasrils etshela izihlwele.
Uthe akukho okwakuphambene ngokucela uMbeki ukuba angenele ihlandla lesithathu njengoba kungekho lutho kuMthethosisekelo we-ANC ephikisa lokhu, ekubeni wayengakwazi ukuhlala amahlandla amabili kuphela njengomengameli wezwe.
Ube esenaba kabanzi ngesinqumo sakhe sokubhala incwadi ngoZuma wananela ngokuthi wazama ukuxwayisa umengameli wokuqala wentando yeningi kuleli, uNelson Mandela ngalo mholi ngemuva kokubona izimpawu ezikhathazayo ngaye.
"Kwakukuningi okwakungikhathaza ngalo muntu futhi ngase ngiwabonile amanye amaphutha ayenokuwenza uZuma ekudingisweni ngase ngiyamxwayisa ngaye uMadiba.
"Amanye alawo maphutha abandakanya ukucwasa ngokobuhlanga, indlela ayecabanga ngayo ngobulili, abesifazane kanye nabathandana nabobulili obufanayo, angiyiphathi-ke eyokuba semuva ngendlela acabanga ngayo," esho.
Uthi uZuma ungumuntu onezimfihlo nowayehlezi esungula izinhlaka ngasese, kusho uKasrils.